शिवलिंगको पूजा किन गरिन्छ ? यस्तो छ कारण…… – SUDUR MEDIA
August 6, 2021 AdminLeaveaComment on शिवलिंगको पूजा किन गरिन्छ ? यस्तो छ कारण……
हिन्दु धर्मवालम्बीहरुका लागि शिवलिं’गको विशेष महत्व छ । शिवलिं’ग भनेको भगवान शंकरको प्रतिक मानिन्छ । धर्मशास्त्रका अनुसार लिं’ग भनेको शक्ति हो । त्यसले उत्पादक शक्तिको चिन्हको रुपमा लिं’गको पूजा गर्ने गरिन्छ । लिं’गको पूजा गर्नाले सबैको पूजा हुन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । शिवलिं’गमा यो’निलाई मात्री शक्तिको प्रतीक मानिन्छ । शिवलिं’गले पूरा ब्रह्माण्ड पुरुष र महिलाको ऊर्जाले बनेको हो भन्ने इंगित गर्दछ ।
शिव लिं’ग पुजा गर्नुका केही कारण यस्ता छन्: शिवलिं’ग मान्यताको अनुसार, लिं’ग एउटा बिशाल लौकिक अ’न्डाशय हो जसको अर्थ पूरै ब्रह्माण्डको प्रतीक हो । शिवलिं’ग र त्रिमूर्ति– त्रिमूर्तिको मतलब हो ब्रह्मा, विष्णु र महेश यसलाई अझ राम्रोसँग जान्ने हो भने यी तीनले सत्य, ज्ञान र अनन्तलाई दर्शाउँछन् ।
शिवलिं’गका बारेमा दुई एक पटक ब्रह्माजी र विष्णुजी बीच वि’वाद उत्पन्न भयो । ब्रह्माजीले सृष्टिकर्ता भएको कारणले श्रेष्ठ भएको दावी गरे र विष्णुले सृष्टिको पालनकर्ता भएको कारणले आफू श्रेष्ठ भएको दावी गरे । त्यसपछि त्यहाँ एक विशाल लिंग उपस्थिति भयो र दुवै देवतामा सहमतिले यो निश्चय गरियो कि जसले यो लि’ङ्गको समाप्ती बारे पहिला पत्ता लगाउछ त्यो नै श्रेष्ठ हुनेछ ।
दुवै जना विपरित दिशामा शिवलिं’गको समाप्ति खोज्न निक्लिए । तर उनीहरुलाई कुनै समाप्ति मिलेन यसले उनीहरुमा यो ज्ञात हुन्छ कि शिवलिं’ग नै अनन्तकाल हुन् । शिवलिं’गको उत्पत्ति यसको कुनै रंग हुँदैन । यो जुन रंगको सम्पर्कमा आउँछ त्यही रंगको हुन्छ । शिवलिं’गको पूजा ध्यान साधनाको लागि हो र यसलाई निर्गुण ब्रह्मा पनि भनिन्छ ।